Weerar qasaaro gaystay oo ka dhacay Camaara iyo xiisad halkaasi ka taagan Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Weerar qasaaro gaystay oo ka dhacay Camaara iyo xiisad halkaasi ka taagan Maleeshiyaad hubaysan ayaa maanta weerar qasaaro sababay waxa ay ka gaysteen deegaanka Camaara ee koofurta gobolka Mudug kaasi oo keenay xiisad dagaal ay ka ooganto deegaakaasi.
Sida ay inoo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah maleeshiyaad hubeysan oo aan la aqoon cida ay ka amar qaataan ayaa waxa ay maanta weerar ku qaadeen dad reer guuraa ah oo ku sugan deegaanka Camaara ee Koofurta gobolka Mudug.
Rasaas ay maleeshiyaadkaasi ku fureen dadkaasi reer guuraaga ah ayaa waxa ay sababtay geerida 3 ruux oo rayid ah iyo dhaawaca qaar kale, iyadoo kooxihii falka gaystay ay wararku sheegayaan inay baxsadeen.
Arrintaasi ayaa hada dad deegaanka ah waxa ay kusoo waramayaan in ay keentay xiisad dagaal oo ka taagan deegaanada Camaara iyo Bacadweyne ee gobolka Mudug taasi oo u dhaxeysa beelo wada daga labada deegaan.
Marar badan ayaa waxaa ka dhacay deegaanada Camaara iyo Bacadweyne dagaal beeleedyo soo laalaabtay oo sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac.